Passion ဘယ်လိုရှာရမလဲ? – How She Did It
BlogWork-life Integration |
Passion ဆိုတာ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာ၊ အရမ်းအားစိုက်စရာမလိုပဲ စိတ်ပါလက်ပါနဲ့လုပ်ချင်တဲ့အရာ၊ အချိန်တွေ ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိအောင် စိတ်ကိုနှစ်ပြီး လုပ်နိုင်တဲ့အရာ။ Passion ကိုအခြေခံတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်ကို လုပ်ကိုင်တယ်ဆိုရင် အောင်မြင်နိုင်ခြေ ပိုများတယ်လို့ ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းက အလုပ်အပေါ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှု (motivation) က အလုပ်လုပ်ရင်းရတဲ့စိတ်ကျေနှပ်မှုဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု တွေဖြစ်တဲ့ ဝင်ငွေရတာ၊ ရာထူးတိုးတာ၊ လူအထင်ကြီးတာ စတဲ့အရာတွေကနေလာတာမဟုတ်တာကြောင့်။ အဲ့ဒီတော့ လခရတဲ့အချိန်မှာ motivate ဖြစ်ပြီး၊ promotion တွေမရတဲ့အခါ motivation ကျတာမျိုးတွေ သိပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ ရာထူးခေါင်းစဉ်တွေထက် တကယ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ပျော်မွေ့တဲ့အတွက် ရာထူးကြီးတာ၊ငယ်တာ/ ရာထူးခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲတာထက် ကိုယ်ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတာ (autonomy), တာဝန်ယူခွင့်ပေးတာ (responsibility) နဲ့ အလုပ်နဲ့ပတ်သပ်တဲ့ တီထွင်ကြံစခွင့်ပေးတာ (creativity) ကကိုယ့်အတွက် အရေးပါတဲ့အရာတွေ ဖြစ်တယ်။
Passion ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ၊ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ စတဲ့မေးခွန်းတွေဟာ လူငယ်တွေမှမဟုတ်၊ လူလတ်နဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေကလည်း သိချင်တဲ့မေးခွန်းပါ။ ဒါကြောင့် Passion နဲ့ပတ်သပ်ပြီး ဒီ (၃)ချက်ကို သိကိုယ်သိထားစေချင်တယ်။
(၁)လူတစ်ယောက်မှာ passion တစ်ခုထပ်မက ရှိတယ်။
ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေ တစ်ခုထပ်မကရှိတာဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာ၊ ဗျာများတာလို့ တစ်ချို့တွေကထင်ကြတယ်။ ဒါကိုလည်းမကောင်းဘူးလို့မြင်တတ်ကြတယ်။ တစ်ခုတည်းကိုပဲ ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်သင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ ဒါလည်းမမှားပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူဘူး။ စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုတည်းကိုပဲ ဆွဲဆွဲမြဲမြဲ လုပ်ချင်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်၊ အသက်အရမ်းငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သိပြီး အဲ့ဒါကိုပဲလေ့လာတယ်၊ အဲ့ဒီမှာထူးချွန်အောင်လုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ အဲ့ဒါနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြတယ်။ ဒါကိုလူတွေအတော်များများက နမူနာယူသင့်တဲ့လူမျိုးလို့ ခံယူထားတော့ သူတို့မတူတဲ့သူတွေ/ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်သူတွေက ဘဝမှာအရာမရောက်သူတွေလို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ တကယ်တန်းတော့ မတူညီတဲ့သူတွေပါ။ အဲ့ဒီသူတွေက အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေများတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာမှထွေထွေထူးထူးစိတ်မဝင်စားဘူး။ ပညာသင်တဲ့အခါမှာလည်း တစ်ခုတည်းမှာထူးချွန်တာမဟုတ်ပဲ အားလုံးကိုဖြန့်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်။ အဲ့လိုလူမျိုးကျတော့ passionate မဖြစ်တာလားဆိုတော့ သူတို့စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုခုကို မတွေ့သေးတာ၊ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဝင်စားစရာတွေ တစ်ခုမကရှိတဲ့အတွက် စိတ်ခံစားချက်က အဲ့ဒါတွေအားလုံးမှာဖြန့်ထားတာ။ စာအုပ်ကလေးဖတ်နေရရင်ကျေနှပ်တယ်၊ သီချင်းလေးနားထောင်မယ်ဆိုရင်လည်း ပျော်တယ်။ အဲ့လိုဖြန့်နေတတ်တဲ့ passion တွေကိုအခြေခံတဲ့အလုပ်ကို ရွေးတဲ့အခါ တစ်ခုမကရှိတာကြောင့် ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်ကျောင်းအလုပ်က passion နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ အလုပ်ပြင်ပမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ project လေးလဲဖြစ်နိုင်တယ်။
အသက်အရွယ်အလိုက်၊ ဘဝအတွေအကြုံအလိုက် passion တွေကပြောင်းလဲတတ်တယ်။ အဲ့လိုပြောင်းလဲတဲ့အတွက် passion အစစ်မဟုတ်ဘူးလို့လဲပြောလို့မရဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေက ကိုယ့်ရဲ့အခြေခံစိတ်ခံစားချက်အပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်စေတယ်။ ကိုယ့်ဘဝက လိုလေသေးမရှိပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတဲ့အခါ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေက ဘဝနဲ့ပတ်သပ်ပြီး သိပ်စဉ်းစားစရာမလိုပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလုပ်နိုင်တဲ့အရာ၊ ငွေကြေးကိုထည့်စဉ်းစားစရာမလိုပဲ လုပ်နိုင်တဲ့အရာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ့်ဘဝအတွေ့အကြုံက မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဘစာသင်ပေးဖူးတယ်ဆိုရင် ကိုယ့် passion က အပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကို ထိတွေ့ဖူးတဲ့အတွက် ကိုယ့်စိတ်ခံစားမှုကလည်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အတွေ့အကြုံအသစ်၊ အသိပညာအသစ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ပေးပါ။ အတွေ့အကြုံအသစ်လို့ပြောတဲ့အခါ အလုပ်ခဏခဏပြောင်းတာဟာ အတွေ့အကြုံအသစ်ယူတဲ့နည်းလမ်း မမှန်ပါဘူး၊ လက်ရှိအလုပ်မှာတင် အတွေ့အကြုံအသစ်ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရနိုင်သလို၊ အလုပ်ပြင်ပ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်တာ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ personal project လုပ်တာတွေ၊ ဟောပြောပွံတက်ရောက်တာ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို အခြေခံပြီး လူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးတာ စတဲ့အလေ့အကျင့်တွေအများကြီး လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကိုယ့်ကိုထိတွေ့မှုအတွေ့အကြုံတွေ ပေးနိုင်တာကြောင့် passion အပေါ်မှာလည်း အကျိုးသ်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စနိုင်ပါတယ်။
Passion ဆိုတာ ရှာရတာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မခံယူတယ်။ ရှာတယ်ဆိုတာ ပျောက်နေတဲ့အရာတွေကို ရှာရတာပါ။ Passion ဆိုတာပျောက်နေတာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်မှာပါလာပြီးသား ကိုယ်မသိသေးတာ။ ရှာရမယ့်အစား သိနိုင်မယ့်အရာတွေလုပ်ရင်း သိလာနိုင်ပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောသလို အလုပ်အကိုင်၊ အတွေ့အကြုံ၊ အထိအတွေ့ကနေတဆင့် သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကူးတကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်မှုလုပ်နိုင်မှ ကိုယ်ထိတွေ့လိုက်တဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက ကိုယ်ဘာကိုစိတ်ဝင်စားတတ်လဲဆိုတာကို ညွှန်ပြနိုင်မှာပါ။ ဥပမာ ကိုယ်ကျောင်းပွဲတစ်ခုမှာပါဝင်ပြီး နေ့တစ်ပိုင်းလောက် ကူညီဝိုင်းလုပ်ပေးခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲ့ဒီမှာ လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကို နေရာချထားတဲ့အလုပ်လေးလုပ်တယ်။ အဲ့လိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ပါ၊ ဘယ်အလုပ်ကိုစိတ်တက်ကြွမှုရှိပြီး၊ ဘယ်အလုပ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားမှုကျသွားစေလဲ။ စိတ်တက်ကြွစေတဲ့အလုပ်ကို နောက်တစ်ခါ၊ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ထပ်လုပ်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ ဒီတစ်ခါကျောင်းပွဲတော့မဟုတ်ဘူး တရားပွဲ၊ ဟောပြောပွဲတစ်ခုကို ကူညီပြီးပွဲစီစဉ်ကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီမှာရော ဘာကိုစိတ်ဝင်စား၊ ဘာကိုစိတ်မဝင်စားဘူးလဲ။ ပထမတစ်ခါနဲ့ ယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ ဘာတွေကွာခြားမှုရှိလဲ? ဒီလို တကူးတကလုပ်ယူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်မှ passion ဆိုတာကိုသိလာနိုင်မှာပါ။
စာဖတ်သူတွေရော ကိုယ့် passion ကိုသိလား? ဘယ်လိုသိတာလဲ?
#HowSheDidIt #LetsGetOverIt #Passion #FearlessFriday